Sehatra fizahan-tany ara-panatanjahantena ao amin'ny Forum momba ny toekarena fizahan-tany manerantany any Macau
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Sehatra fizahan-tany ara-panatanjahantena ao amin'ny Forum momba ny toekarena fizahan-tany manerantany any Macau
Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao Mafana Macau • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • fampiasam-bola • fivoriana • Vaovao • Sports • Travel Wire News
Ny sehatry ny fizahan-tany ara-panatanjahantena miha-mitombo dia nanjary dingana lehibe indrindra tamin'ny Forum momba ny fizahan-tany manerantany ao Macau, SAR miaraka amin'ny fanontana 'SPORTSTECH' voalohany an'ny Fikambanan'ny fizahantany fizahan-tany momba ny fizahan-tany izay mankalaza ireo hevitra sy mpanakorontana manerantany indrindra.
Rehefa nitatitra ny World Tourism Organisation (UNWTO) fa mitombo isa ny mpizahatany mandeha amin'ny fanatanjahan-tena na ny soa, dia natomboka ny fifaninanana mba hamantarana ireo fanombohana manohana izay mivoatra amin'ny fomba maro, ao anatin'izany ny mety ho fisondrotan'izy ireo sy fahaizana manampy amin'ny fandraisana anjara amin'ny fanatrarana ny tanjona maharitra amin'ny fampandrosoana.
Ao anatin'ny sehatry ny Forum momba ny toekarena fizahan-tany eran'izao tontolo izao, dimy tamin'ireo finalista tamin'ny fifaninanana fanombohana fizahan-tany momba ny fizahan-tany UNWTO 1 no nasaina ho any Macau ho an'ny masterclass manokana momba ny fitobiana sy ny fisarihana ny fampiasam-bola. Ireo finaliste dia niatrika ny "Start-Up Battlefield" taorian'ny sesiona nifantoka tamin'ny ho avin'ny fizahan-tany ara-panatanjahantena sy ny mety hisian'ny teknolojia manakorontana hamoronana lanja ho an'ny fizahantany.
Ny sekretera jeneralin'ny UNWTO, Zurab Pololikashvili, dia nanokatra ny hetsika fizahan-tany momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany, izay nanasongadina ny fanohanan'ny masoivohon'ny Firenena Mikambana ny fanavaozana. Ny fizahantany ara-panatanjahantena koa dia afaka mandray anjara amin'ny famoronana fandriam-pahalemana, faharetana ary fampidirana ao anaty, fananganana tetezana eo amin'ny firenena sy kolontsaina samihafa. Ny UNWTO dia miarahaba ny fanavaozana amin'ity sehatra miavaka ity ary miarahaba ireo finalista rehetra androany amin'ny fahitany sy ny fahavononany. ”
Ireo dimy tompon-daka farany izay nandresy ny fifaninanana matanjaka tamin'ny fanombohana an-jatony maro eran'izao tontolo izao nahatratra an'i Macau dia:
Flyfoot (Libanona) - Fly-Foot no sehatra an-tserasera voalohany ahafahan'ireo mpankafy baolina kitra mamandrika fonosana fitsangatsanganana rehetra mba hijerena ireo ekipa tian'izy ireo hilalao amin'ny tsindry vitsivitsy fotsiny ary hampiroborobo ireo vondrom-piarahamonina baolina kitra eo an-toerana.
Fiaraha-mientana mitarika notarihin'ireo olona manana fahasembanana (Japon) - maso misahana ny fizahan-tany manokana amin'ny fampifanarahana ny dia sy fanatanjahantena amin'ireo olona tsy afa-mihetsika afa-tsy hampitombo ny fampidirana fiaraha-monina.
Oevit (Etazonia) - vahaolana tokana hiantsenana ho an'ny ekosistia iainana. Oveit dia manambatra akaikin'ny fifandraisana an-tsaha sy ny fandoavam-bola biometrika, ny firotsahan'ny mpihaino, ny programa tsy fivadihana, ny fifehezana ny fidirana, ny fisoratana anarana ary ny (e) tapakila.
WeFish (Espana) - Manolotra rindranasa fanjonoana izay mifandray, tsotra ary ara-tsosialy - novolavolain'ny mpanjono ho an'ny mpanjono.
Runnin'City (Belzika) - Runnin'City dia rindrambaiko finday avo lenta izay mamela anao hahita tanàna 200 manerana an'izao tontolo izao rehefa mihazakazaka (na mandeha)